Afaka mahazo toro-hevitra manokana avy amin'ny Amazon marketing consultant ve aho?
Fantatry ny mpanadihady ara-barotra Amazon rehetra fa hanatsara ny fivarotana sy ny fivoaranao eo amin'ny tsenan'ny toeram-pivarotana maro be, dia tena zava-dehibe tokoa ny miasa tsara amin'ny fizarana rehetra amin'ny lisitry ny vokatrao. Ary ireto misy toro-hevitra sasantsasany ho anao mba hanomezan-danja ny fandrosoana nataonao eo amin'ny Amazon. Farany - mba hahazoana vahaolana maimaika ho an'ny varotrao any.
Mpivady torohevitra tena ilaina avy amin'ny Amazon Marketing Consultant
Tip One: Tombon'ny fikorontanana sy fotoana isaky ny fitsidihana
Mora ny mandre tsara ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny lisitry ny vokatrao amin'ny Amazon, ary koa ny tranonkalan'ny tranonkalanao mifandraika amin'ilay lohahevitra. Anisan'ireo lohahevitra manan-danja indrindra eto ambany ny taham-pivoaranao sy ny salam-paharetan'ny fotoana lanin'ny mpitsidika. Tsotra ny zava-drehetra - raha mandany fotoana bebe kokoa amin'ny pejin'ny lisitry ny vokatrao ny mpanjifanao, dia mety ho mora kokoa aminy ny hiova fo amin'ny tena mpividy. Ary ny mifamadika amin'izany, raha avo loatra ny taham-pitenenana avoakanao - midika izany fa ny vokatra voatanisa ao Amazonia dia tsy mendrika tsara.
Ireto manaraka ireto ny soso-kevitra saro-takarina avy any amin'ny Amazon marketing consultant mba hamahanao ireo olana ireo indray mandeha ary ho an'ny rehetra:
Miezaha hanana ny tsara indrindra Ny votoatiny azo itokiana sy avo lenta - na ny asa sorany manokana momba ny vokatra, na ireo nozaraina avy any an-toeran-kafa any.
Aza andrasanao ny fotoananao sy ny ezaka amin'ny fanoratana metadata tena mahasarika sy mahasarika.
Ampitomboy ny faharetan'ny fitsidihan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampidirana lesona, fanoritsoritana, na fijerena vokatra tsara.
Ataovy izay hahasarika ny votoatinao izay manintona kokoa sy mamaky azy - ny famerenana fanavaozana ny ampahany amin'ny asa soratry ny soratra tsotra ho zavatra iray tena mahavariana sy manintona, ohatra, ny spreadsheets na ny infografika.
Soso-kevitra roa: Ny tombam-bidy
Ho mpanolo-tsaina ny Amazon marketing consultant, manoro hevitra ny hametraka ny fifantohana tsara amin'ny fanatsarana ny tahan'ny fihenam-bidy. Izany dia hanampy anao hampitombo ny lisitry ny lisitry ny vokatrao amin'ny Amazon. Na izany na tsy izany, ny algorithma amin'ny alàlan'ny Amazon dia tsy hanandratra anao velively, raha tsy manana fananana tena mahomby ianao, sa tsy izany? Izany no soso-kevitro hatao mba hahatratrarana ny fanatsarana mety amin'ny CTR (click-through-rate) amin'ny Amazon:
Ataovy azo antoka fa mamaritra ny momba ny vokatra - jerena. Alao sary an-tsaina hoe toy ny mpanjifa mety ianao - mety hanana fanontaniana manan-danja ve ianao rehefa mamaky io famaritana vokatra io? Raha eny ny valiny, tena azo inoana fa ny zavatra ataonao dia tena diso.
Aza adino ny manome hery ny famariparitana ny vokatrao miaraka amin'ny votoaty hita maso, toy ny sary avo lenta, horonan-tsary, sary an-tsary ary zavatra hafa mahasoa fampahalalam-baovao mba hampiseho ny soso-kevitry ny vokatrao, mifanaraka amin'ny fampisehoana ireo singa fototra amin'ny fampiasana azy isan'andro.
Ny famariparitana momba ny vokatra dia tsy maintsy mazava tsara hoe inona avy ny fampitahàna fampitahana no mamadika ny tolotra vokatrao ho toy ny fivarotana tena mahavariana. Amin'izany, andramo ny fanamarinana fanamarinana maromaro ho an'ny antoko fahatelo araka izay tratra.
Aza sakanana ny fotoananao sy ny ezaka ataonao amin'ny fametrahana fomba fijery A / B miaraka amin'ny fandaharam-pitsapana matetika. Aza misalasala manandrana manana traikefa azo tsapain-tanana amin'ny sary samihafa, fitambaran-teny maotina, ary karazany maromaro amin'ny famaritana vokatra vokatrao mba hahitana izay azo hatsaraina, inona no tokony hohalavirina amin'ny ho avy, ary inona no mety tsy ahafahana miala avy hatrany Source .